Ity ny safidintsika manana kalitao tsara indrindra add-ons ho an'ny Microsoft Flight Simulator 2020 (MSFS2020). Hanatsorana ny fametrahana ny add-ons fampidinana tsirairay dia miaraka amin'ny installer mandeha ho azy. Misafidiana iray amin'ireo sokajy hanombohana ny fisintomanao.
Manomboka amin'ny fiaramanidina maivana mankany amin'ny fiaramanidina malalaka, manidina fiaramanidina feno pitsopitsony sy marina ao amin'ny taranaka ho avy amin'ny Microsoft Flight Simulator. Andramo ny fahaizanao manamory fiaramanidina manohitra ireo fanambin'ny sidina manidina amin'ny alina, ny simulateur atmosfera amin'ny fotoana tena ary ny toetr'andro mivantana amin'ny tontolo miaina sy miaina. Mamorona ny drafi-sidinao na aiza na aiza eto ambonin'ny planeta.
Ny fisintomana rehetra ho an'ny Microsoft Flight Simulator 2020